မြေငလျင်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? ရေးသားသူ- အားမာန်၊ ထွန်းခိုင် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » ​မြေငလျင်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? ရေးသားသူ- အားမာန်၊ ထွန်းခိုင်
​မြေငလျင်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? ရေးသားသူ- အားမာန်၊ ထွန်းခိုင်
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းကို ဖြတ်သန်း၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်အောင်၊ တောင်ပိုင်းတစ်လျှောက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအားဖြတ်၍ ကပ္ပလီပင်လယ်အထိ ရှည်လျားလှသော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြော (စစ်ကိုင်းငလျင်ကြော)ကို စတင်ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိလိုက်ပြီးနောက် ဒေါက်တာဝင်းဆွေအဖို့ ခံစားချက်နှစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
“လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်တယ်။ Second Thought (ဒုတိယအတွေး)ဒါကအန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငလျင်အကြောင်းကို ပိုပြီးတော့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာဖြစ်တာ”ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ဘူမိဗဒဘာသာရပ်ဖြင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ယူခဲ့သော ဘူမိဗေဒပညာရှင်နှင့် မြေငလျင်ပညာရှင် ဒေါက်တာဝင်းဆွေက ပြောပါသည်။
ထိုအချက်သုံးချက်မှာ အေ၊ ဘီ၊ စီ ဖြစ်သည်။ အေမှာ Anchorage ဖြစ်ပြီး အုတ်မြစ်များကို မြဲမြံစွာ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘီမှာ Bracing ဖြစ်ပြီး ထုတ်များ၊ တန်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ကျားကန်ထားရန်နှင့် စီမှာ Connectionဖြစ်ပြီး တိုင်များ၊ တန်းများကို ဆက်သည့် ဂျွိုင့်(အဆုံ)များကို ခိုင်ခံ့အောင် ဆောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သုံးချက်မှာ ငွေကြေးများစွာ မကုန်ကျဘဲ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ယခုနောက်ပိုင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းအတတ်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍ တတ်မြောက်သိရှိမှု အားနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများကို ပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါတော့မည်။
← National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ by Ohn Mar Oo	by ​​Ohn mar Oo ​​ပါကစ္စတန်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာအင်အားကြီးထွားလာအောင်ပြုလုပ်နေမှူနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကြမ်းဖက်သင်တန်းေ ပးမှူတွေကိုအိန္ဒယကဖော်ထုတ်ထားတာပါတယ်။သိထား သင့်ပါတယ်။ →